Orinasa mpamokatra keychain roul silika China | SJJ
Fandraisana an-tànana sy fantsom-baravarana Silicone dia raisin'olona manerana an'izao tontolo izao noho ny kalitaony avo lenta, maharitra mandritra ny fotoana lava sy mampiavaka ny loko. Natao ho an'ny fampiroboroboana, fanatanjahan-tena, sekoly, fety ary hetsika hafa izy ireo.
Silika KeychainNy s sy ny keyrings dia raisin'olona manerana an'izao tontolo izao noho ny kalitaony avo lenta, maharitra mandritra ny fotoana lava ary mampiavaka ny loko. Natao ho an'ny fampiroboroboana, fanatanjahan-tena, sekoly, fety ary hetsika hafa izy ireo. nyrojo vy keyzoary ny keyrings avo lenta dia vokatra tonga lafatra hampiroborobo ny fikambanananao na ny orinasanao, maneho ny hevitry ny mpamorona sy ny fanahiny. Ny habe sy ny loko mitambatra isan-karazany no mahatonga nyrojo vy keyzoary ny keyrings mahafinaritra sy manintona kokoa ary manintona kokoa, mora kokoa ny manao dokam-barotra amin'ny besinimaro. Tsy ho tapaka izy ireo, ary tsy halazo ny loko efa ela akory aza, hahatratra tombony ara-toekarena ambonimbony kokoa.
Ny fanomezana tsara tarehy mamirapiratra dia manondrana rojo vy keychain sy keyrings an-tapitrisany isam-bolana. Ny kalitao sy ny fotoana itarihana dia derain'ny mpanjifanay. Mifandraisa aminay amin'ny fotoana rehetra, ny ekipanay matihanina dia hanampy amin'ny tetikasanao amin'ny voalohany.
Volavola: 2D, 3D, lafiny tokana, lafiny roa
Loko: afaka mifanitsy amin'ny loko PMS, milomano, fizarana, loko mamirapiratra, maivana kokoa, ar
misy ihany koa.
Logos: Logos azo pirinty, embossed, debossed, ink-mifandray, Laser voasokitra
Attachment: peratra mitsambikina, peratra fanalahidy, rojo vy, farango na araho ny torolalanao
Teo aloha: Raharaha telefaona silika
Manaraka: Kitapo kitapo Silipo sy kitapo Silipo
Zavakanto keychain Best Awm Keychain
China Pricelist Keychain Keychain tsara indrindra
Teny nindramina keychain tsara indrindra any Sina
rojo vy keychains
Fehin-tànana amin'ny bracelet vita amin'ny silika
rojo vy keyzo
Akoho mitomany miantsoantso